परपुरुषसँगको तस्वीरको चर्चा सेलाउन नपाउदैँ विमला वलीको अर्को काण्ड बाहिरियो ! – List Khabar
Home / समाचार / परपुरुषसँगको तस्वीरको चर्चा सेलाउन नपाउदैँ विमला वलीको अर्को काण्ड बाहिरियो !
परपुरुषसँगको तस्वीरको चर्चा सेलाउन नपाउदैँ विमला वलीको अर्को काण्ड बाहिरियो !
admin August 22, 2021 समाचार Leaveacomment 251 Views
परपुरुषसँगलाई चुम्बन गरेको तस्वीरको चर्चा सेलाउन नपाउदै प्रदेश सांसद विमला ओलीको अर्को काण्ड बाहिरिएको छ । उनी एमालेकै सांसद भएको पुष्टि भएपछि प्रदेश राजनीतिमा तरंग पैदा गरेको हो । उनी एमालेमै रहेको पुष्टि भएपछि विमलाको वलीको यो अर्को काण्ड भन्दै सामजिक सञ्जालमा भाइरल भएको छ ।
२०७७ चैत ५ गते प्रदेशसभा सचिवालयले पत्र संख्या ०७७र०७८ को चलानी नं। ५३३ मा एमालेलाई सांसद विवरण पठाउन भनेको थियो। त्यही पत्रका आधारमा २०७७ चैत १५ गते एमालेले प्रदेश सभा सचिवालयलाई पठाएको सांसदहरूको विवरणलाई प्रदेशसभा सचिवालयले सहीछाप लगाई प्रमाणित गरिदिएको थियो।
एमालेबाट निर्वाचित सांसद उत्तरकुमार वलीको सडक दुर्घटनामा परी निधन भएपछि तत्कालीन नेकपाले दाङ क्षेत्र नं। ३ ९ख० बाट उनकै श्रीमती विमला कुमारी खत्री वलीलाई उम्मेदवार बनाएपछि निर्वाचित भएकी थिइन्।
तर नेकपा विभाजन भएर सरकार बनाउने र ढाल्ने खेल सुरू भएपछि भने वलीले कहिले एमाले त कहिले माओवादी केन्द्र रोजेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्दै आएकी थिइन्।
पछिल्लो पटक शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा सरकार बनाउन वलीको मत निर्णायक बनेको थियो।
एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशसभा सचिवालयलाई सम्बोधन गरी १५ चैत ०७७ मा पठाएको ४३ जना सांसदको विवरणको ४३ नं। मा विमला वलीको नाम रहेको छ। सोही पत्रमा प्रदेससभा सचिवालयले छाप लगाएर वलीलाई एमाले सांसद भएको प्रमाणित गरिदिएको छ।
वलीले पहिले एमाले रोजेपछि मात्र माओवादी बनेको र पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको बताए।पार्टीले सोधेको स्पष्टीकरणको चित्तबुज्दो जवाफ नआएपछि उहाँलाई पदमुक्त गर्न सभामुखलाई पत्र बुझाएका छौं, उनले
भने,‘त्यही कारण वली पदमुक्त भएको सूचना सभामुखले भन्नुपर्छ हाम्रो माग नै त्यही हो।’ उनले अजय शाही पनि सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित भएपछि स्वतन्त्र भन्नु कानूनविपरीत भएकाले पदमुक्तका लागि निर्णय गरिएको बताए। अनलाइन मार्गबाट
Previous अमेरिकाको यस्तो कडा चेतावनीले विश्वभर तरंग, अब के गर्छ तालिबान ?
Next होशियार ! धेरै विर्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ”(जानी राखौ) २ मिनेट समय दिएर अवस्य पढ्नुहोस